UBUNTU obuNtsha kunye neLoft eStylish enePool, indawo yokuPaka, iBBQ! - I-Airbnb
UBUNTU obuNtsha kunye neLoft eStylish enePool, indawo yokuPaka, iBBQ!
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEugenio
ILoft entsha engakholelekiyo enelanga kakhulu enendawo yokupaka, iphuli kunye ne-BBQ embindini weSan Isidrio, ukufikelela ngokulula kuyo nayiphi na indawo yesixeko! Indawo ilunge kakhulu, kufutshane nololiwe kunye neebhasi eziya kukuthatha kungekudala ukuya kwezona ndawo zinomtsalane esixekweni.
YiLoft entsha kraca kweyona ndawo ikhethekileyo kwindawo yaseSan Isidro.
Le ndlu iLoft ineempawu ezintle ezinje ngeholo yokungena ebanzi, indawo yokupaka, igrill, kunye nephuli.
Ikufuphi neevenkile ezininzi, iiresityu kunye nemivalo. Idityaniswe kakuhle kakhulu luthutho lukawonke-wonke kunye nesixeko sonke, iimitha ukusuka kumzila kaloliwe we-Miter okushiya kumbindi wesixeko malunga nemizuzu engama-30!
> Indlu inobukhulu be-65 m2 (Ayibandakanyi ezinye iindawo eziqhelekileyo zesakhiwo).
> 1 igumbi lokulala:
- Igumbi elikhulu eli-1 elinobukhulu bokumkanikazi (Indawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwi-2 abantu) kunye nesuti yohlobo lokuhlambela labucala.
- Idesika yoyilo.
> Kwigumbi lokuhlala:
I-1 sofa enkulu, inokuguqulwa ibe yibhedi ukuya kumntu omnye.
-Isantya esiphezulu se-fiberglass ye-Wi-Fi ye-Intanethi.
-Isikrini esikhulu seTV esisicaba.
-Itafile enkulu yokutyela enamathuba okuhlala abantu abangaphezu kwe-4.
***** Ixhotyiswe nge-air conditioning ehlotyeni kunye nokufudumeza okuphakathi ebusika, igumbi lokulala linendawo yokugcina, nokuba ziikhabhathi, iikhabhathi okanye iishelufu.
- Zixhotyiswe ngokupheleleyo (imicrowave, oomatshini bekofu yeNespresso, isifudumezi samanzi, ifriji) kunye nomatshini wokuhlamba.
> Igumbi lokuhlambela eli-1 kwiSuti (ineshawa kunye nendlu yangasese).
> Ibhedi yomntwana kunye nesitulo somntwana (ngesicelo).
> IPatiyo / Igadi: Yabucala ngeentyatyambo ezintle kunye neBBQ!
> Indawo yokupaka yasimahla kwiflethi!
Le ndlu ifanelekile kwiintsapho (kunye nabantwana), kubahlobo kunye nohambo lwezoshishino. Inika ubumfihlo kunye nenyaniso oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Zive ukhululekile ukucela iinkonzo ezongezelelweyo, ezinjengokupheka ngasese, ukucoca okanye ukukhathalelwa kwabantwana, isithuthi okanye nantoni na onokuyidinga.
Iphupha lokwenyani entliziyweni yeSan Isidro Buenos Aires! Le ndlu iya kwenza uhambo lwakho oluya eBuenos Aires lungalibaleki.
Le ndlu ikwesinye sezitrato ezinomtsalane kwindawo yaseSan Isidro.
ISan Isidro ngoku yenye yeendawo ezihlala ifashoni eBuenos Aires kwaye ibonelela ngeendlela ezininzi zenkcubeko kunye negastronomic. Le ndawo yindawo yokumisa okunyanzelekileyo kuyo nayiphi na indwendwe kwisixeko. Kwiindawo ezingqongileyo, akukho zikwere ezintle kuphela, iicawe kunye neemarike, phakathi kwezinye iindawo ezininzi ezinikezelwa ngummelwane. Kukho amakhulu eebha, iivenkile zokutyela zabayili, iivenkile zempahla ezikhethekileyo, iipaki kunye nethiyetha.
Ubumelwane bukwaqhagamshelwe ngokugqibeleleyo, ungafika eRetiro ngemizuzu nje engama-30 ngololiwe. Ukongeza kwiibhasi ezidibanisa ecaleni kwesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Eugenio
Ifumaneka iiyure ezingama-24 kuyo nayiphi na imfuno undwendwe olunokuba nayo.